विवाहः विधिविधान र परिणाम
वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, माघ २५, २०७६ मा प्रकाशित
गत मंगलबार एउटा विवाहमा सहभागी हुनु थियो । गाउँको भाइबहिनीको विवाह । दुबै अष्ट्रेलिया बस्ने, विवाहका लागि केही हप्ताको छुट्टि लिएर नेपाल आएका । दुबैको घर थाहानगर तर विवाह काठमाडौंबाट । किन ? बेहुलीको इच्छा बेहुलाको समर्थन । विवाहको सबै विधि विधान खर्च गर्न तिर नलागौं । विवाहमा एउटा गज्जबको कुरा छ– ‘स्वंयवर’ । यो कुरा त्यो जोडीको हकमा पनि लागू हुन्छ । स्वयंले वर रोजे, स्वयंले वधु रोजे । यस्तो अवस्थामा ‘स्वंयवर’को मर्म पूरा हुन्छ ।
वेहुला बेहुलीले स्वयंवरको विधि पूरा गरे, मुहारमा गज्जबको आभा थियो । सबैको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन, आफूलाई मन हुँदैन, तैपनि कति छोरीहरु बाआमाले रोजेको केटासँग ‘स्वंयवर ’गर्न विवश छन । विवाहको सबै विधिहरु निरन्तर गतिमा अघि बढिरह्यो । वेहुलीलाई कपडा फेर्न र सिंगारपटारमा धेरै समय नलगाउनु है भन्ने आग्रह पनि स्वीकारे, समयलाई खुब ध्यान दिए । अहिलेसम्म पंक्तिकार सहभागी भएका विवाहमा मध्ये छोटो समयै विवाह मण्डपमा हाजिर हुने वेहुली उनै थिइन । साँझ ६ बजेपछि वेहुली अन्माउने बेला भयो । वेहुली अन्मिने बेलामा रुन्छिन कि रुन्नन ? आम जिज्ञासा यही हुन्छ । तर रोइनन । बाआमा पनि रोएको देखिएन । हाँसीखुशीले नै विवाह सम्पन्न भयो । आपसी समझदारी, विश्वास र सल्लाहले सबै काम ठीक समयमा मुस्कानका साथ सकिने रहेछ, भन्ने उदाहरण हो यो ।
अब झण्डै पाँच वर्ष अघिको घटनाको शब्द चित्र कोरौं, २०७१ साल चैत महिनाको पहिलो दिन एक पितृकार्य लागि म टुँडालदेबीको मन्दिर परिसरमा पुगेको थिएँ । भान्छाबाट फुत्त जिन्स पाइन्ट र टिसर्ट लगाएकी किशोरी निस्किइन । गाउँबाट आएकी बूढी आमैले भतिजसँग कानेखुशीको शैलीमा ती किशोरीको बारेमा जिज्ञासा राखिन यी बाबुको त दुई छोरा मात्रै भनेको हैन, यी नानी चाहिं को नि ? भतिजले हाँस्दै जवाफ दिए–‘बुहारी’ । हजुरआमाको वार्षिकी त आज सकिदैछ कसरी बुहारी ? पछि बुझ्नु हुन्छ आमा यी सब । यत्ति भनेर ती आमाका भतिज किनमेलका लागि बजार निस्किए ।
काम सकिएपछि म पनि गफिने मुडमा थिएँ–‘पाँच मध्ये दुई ‘कोरली’ त चिने, तीन चाहिं चिनिन न नि ?’
‘ऊ चाहिं भान्जा (नेपाली चलचित्रमा बालकलाकारदेखि अहिले हिरोको रोल गरिरहेका लक्का जवानतिर देखाउँदै) को गर्लफ्रेण्ड, बिहान अचार बनाउने चाहिं जेठो भतिजको अहिले, भतिजको आमा (काकी( लाई खान खुवाउन सघाउने चाहिं जेठो भतिजको गर्लफ्रेण्ड)’
भान्जा र भतिजहरुले त गर्लफ्रेण्डहरु घरमा ल्याएर ढुक्कले चिनाए, तपाईंका छोरीले पनि ल्याएकी छन, घरमा ब्वाईफ्रेण्ड ?’
‘छोरीले त शहरी संस्कृति पछ्याईसकेकी छैनन ।’
छोरा र छोरीमा बिभेद गर्ने नेपाली समाजका बाआमाले छोराले गर्लफ्रेण्ड लिएर घर आए गर्व गर्छन । छोरीले ब्वाईफ्रेण्डलाई घरमा ल्याए के गर्लान ?
टुँडालदेबी मन्दिरबाट कलंकी आउने क्रममा स्कुटर चालकलाई मैले सोधें– ‘ममीको हेरचाह कस्ले गर्छ त ? उसले स्वभाबिक जवाफ दियो, हामी दाजुभाइले ।’
एक दिन बाटाभरी भिजाएको कपडा लिएर भ-याङ ओर्लदा आमा चिप्लिएर लड्दा मेरुदण्डमा गहिरो चोट लागेछ । त्यसको असर कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको रहेछ । अब उनको हिंडडुलको स्थायी साहरा व्हिलचियर भएको थियो । बुवाचाहिं रोजगारीको सिलसिलामा धेरै वर्षदेखि बिदेशमै बस्ने भएकाले आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मा ती दुई भाइको काँधमा आएको रहेछ । आमा बितेको एक वर्षपछि बिदेशबाट फर्किएपछि उसको बाले आमाको क्रियाकर्म गरेका हुन । अबचाहिं बा घरै बस्ने भएकाले उनीहरु बिदेश जाने योजनामा रहेछन । स्नातक तहमा अध्ययनरत उनीहरु कुन देशमा जाने टुङ्गो लागीसकेको थिएन । सकेसम्म युरोप नभए खाडी नै भए पनि जाने योजना सुनाए ।
(सासुको सम्मानमा बुहारीले व्हिल चियरबाटै पाती चढाइन । छोराहरुले व्हिल चियरमा गुडाएर मन्दिर ल्याएका थिए । आफू जन्मे हुर्केको ठाउँ उनलाई बिरानो लागेछ । ८/१० वर्षमै कति फेरिएछ । आफ्नै गोडाले बिहान केहिबेरमा सारा गाऊँ एक छिनमा डुल्थे तर आज, व्हिल चियमा केहिबेर गुड्दा पनि पूरै ज्यान भुत्ते खुकुरीले काटेर छियाछिया भए जस्तो दुखिरहेछ । कसरी गुडाउने होला बाँकी जिन्दगी व्हिल चियरमा?) निकै निराश सुनिएकी थिइन उनी ।
सासुको वार्षिकी सकियो ।
मामु के ल्याऊँ ? (कान्छो छोराको गर्लफ्रेण्ड) नजिकै आएर सोधिन । केहि चाहिन्न नानी पुग्यो ।
(जेठो छोराको गर्लफ्रेण्ड) दुई वटा लालमोहन बोकेर खुर्रर दौडेर आइन । मामु ल ताततातो छ, खाईस्यो । नाहीं, नानी पुग्यो । म कहिल्यै खान्न लालमोहन ।
फेरी कान्छोकी गर्लफ्रेण्डले नेपकिन पेपर ल्याएर मुख पुछिदिइन, उनको मुहार उज्यालियो ।
म नजिकै बसेर यी सबै दृश्य लियालिरहेको थिएँ, भोलि बैद्यानिक वा औपचारिक रुपमा वुहारी भएपछि यी किशोरीहरुले यस्तै केयरिङ्ग गर्लान त ? मनमा प्रश्नका साथ । यिनीहरुको प्रेम बैबाहिक सम्बन्धमा रुपान्तरण हुनै सकेन भने ?
त्यसको केही समयपछि नै, नेपाली चलचित्रका हिरो र उनकी गर्लफ्रेण्डले यु ट्यूब च्यानलहरुलाई दिएको अन्र्तवार्ता आयो । दुबै सँगै उभिएर एक स्वरमा भनिरहेका थिए– ‘हामी सिंगल छौं, हामी सहमतिमै सम्बन्धमा नरहने गरी अलग्गियौं ।’ ति केटो नेपाली चलचित्रमा काम गथ्र्यो, थोरबहुत परिचित थियो । र उसको प्रेमले विवाहको आकार नलिएको कुरा लोकले थाहा पायो । तर ति दाजुभाइको प्रेमले विवाहको रुप लियो होला कि लिएन होला ?उनीहरु वैदेशिक रोजगारमा गए कि गएनन होला ? आमाको स्याहार सुसार कसले गरिरहेको होला ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ भेटिएको छैन । निजी कुरा हो, खोजी पनि किन गर्नु र हैन, सारा आन्द्राभुँडी खोतली सकेपछि हाम्रो भन्ने चलन छ नि–‘नहिंड्ने बाटोको नामै नलिनु ।’
एसएलसीपछि गाउँबाट शहर पसें, पढ्ने विषय र कलेज बाआमाले छानिदिए । प्रेमी आफैंले छानें । त्यसअघिसम्म दुनियाँमा सबैभन्दा उदार बाआमा त मेरै हुन भन्ने जस्तो लाग्यो, किनकी गाउँबाट टाढा शहरमा कोठा लिएर एक्लै ‘छोरी’लाई पढाए, ७वर्षसम्म कुनै शंका नगरी । एक वर्ष अघि बाआमाले जरुरी काम भएको भन्दै घर बोलाए, म हत्तारिदै गएँ, गएको भोलिपल्ट साँझ मलाई हेर्न केटा बोलाइएको रहेछ, केटी हेर्न भनेर आएको भनेको भोलिपल्टै टीकोटालो गरेर म केटाको घर जानु पर्ने भयो । त्यो बेला के भयो ? भयो, मैले नार्इंं भन्नै सकिन । पञ्चरातको दिन माइत गएँ, बाआमाले सोधे छोरी तँ खुशी त छेस है ? मैले जवाफ दिन सकिन । बाआमाले मेरो सबै प्रेम कहानी थाहा पाउनु भएको रहेछ । प्रेम कहानी थाहा पाउनेले प्रेमी थाहा नपाउने कुरै भएन । तेरा सबै इच्छा हामीले सकी नसकी पूरा गराई दिएकै हौं, यो कुरामा हामीले तँलाई साथ दिन सकेनौं । तिमीले रोजेको प्रेमी हामीलाई मान्य भएन । किनकी जात मिलेन । यी भनाई सुनिरहँदा मलाई मेरा बाआमा दुनियाँका सबैभन्दा संकीर्ण र अनुदार लाग्यो । हिजो सबैभन्दा उदार लाग्ने बाआमाका बारेमा मेरो धारणा एकाएक फेरियो ।
गत मंलबार भिनाजुलाई स्वागत गर्न पार्टी प्यालेसको गेटसम्म पुग्ने र दिदीलाई अन्माएर कार चढाउने बहिनी नजिकै पुगेर भनें– ल तिमीलाई धेरैधेरै बधाई छ ।
उनले धन्यवाद भन्नुको साटोप्रश्नमा जवाफ दिइन– बधाई किन नि मलाई ?
मेरो जवाफ– अब पालो तिम्रै हो, त्यही भएर बधाई तिमीलाई ।
उनको आग्रह– दाइ धेरै नजिस्काउनु मलाई, अहिले ... ।
–हवस्, अब विवाहको जग्गेमै जिस्काउन पाइयोस, छिट्टै ।